Isikhwama Sokucindezela Injoloba seBelt Vulcanizing Press Machine
I-Antai Rubber Pressure Bag isebenzisa ukwakheka kwenjoloba okugcwele, akukho luhlaka lwensimbi, engasindi nengcindezi okusatshalaliswa ngokulinganayo, ngempumelelo nangempumelelo. Kusetshenziswa kukho kokubili ingcindezi yamanzi nemodi yengcindezi yomoya. Yakhiwe ngokuzimela futhi yathuthukiswa yisikhungo se-R & D sika-Antai. Ikhwalithi nokusebenza kwaziswa kakhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Kuyisinqumo esihle ukuhambisana nabezindaba ze-Almex vulcanizing ngokuphelele.
Umnyango wenkampani yethu i-R & D uthathe iminyaka engu-5 futhi yathuthukisa ngempumelelo izikhwama zamanzi ezinengcindezi ephezulu ngo-2005. Lobu buchwepheshe bezinguquko buziqedile ngokuphelele zonke izinhlobo zebhande elihambayo lokuqhakambisa ubuchwepheshe bezindaba futhi buyisuse ngokuphelele iphethini yakudala yomshini wokucindezela i-vulcanizing press. Umphumela ohlangene ufinyelela ukuphakama okusha. Umshini wokuhluza i- “ANTAI” unesikhundla esiphambili emncintiswaneni wezimakethe ngobuchwepheshe bawo obuyisisekelo nekhwalithi ephezulu.
Ukulungiswa Kwe-Edge Vulcanizing Press ye-Rubber Conveyor Belt Ukulungisa
I-Edge Repair Vulcanizing Press ye-Rubber Conveyor Belt, umshini wokulungisa ibhande lokuhambisa irabha, isetshenziselwa kakhulu ukulungisa izindawo ezincane zebhande elihambayo, ukulimala kokubhoboza, ikakhulukazi okufanele kulungiswe izinyembezi zendawo ende nomonakalo ohlangothini lwe-longitudinal, ukulungiswa kokuqala, ibhande eliphakathi ukukhanda, njll. Ithuluzi nelixazululo elingcono kakhulu lokulungiswa kwe-vulcanization okushisayo, umsizi omuhle wokulungiswa okuyingxenye kwamabhande okuhambisa. It’esetshenziselwa kalula ukulungisa amabhande okuhambisa esizeni. It’ukonga isikhathi, okusebenzayo futhi okusebenziseka kalula.
I-PU PVC Belt Vulcanizing Press ye-Thermoplastic Belt Splice
Lo mshini opholile womoya unazo zonke izingxenye ezihlanganiswe nethuluzi elilodwa, elenza ukuthi umshini uxhunywe kalula futhi ulungele ukusebenza. Ukuswayipha okusheshayo nokuphathekayo, ungakuletha kunoma yikuphi kalula.
Umshini Wokucindezela Okungasindi we-Light Rubber Conveyor Belt
I-lightweight rubber conveyor belt vulcanizing press, 2-piece press, aluminium frame style, eyenzelwe ukusebenza ngokushesha futhi okulula, kulula ukuthuthela kunoma yisiphi isikhundla esifunekayo se-splice, engasindi nokusebenza kahle komsebenzi. S
Amafreyimu ama-aluminium alula futhi aqinile aqukethe izingxenye ezingaphezulu nezingezansi zomshini. Ifakwe izibambo ezigoqekayo zombili emikhawulweni yomibili yohlaka olungaphezulu, okulula ukukhuphuka naphezulu. Ibhokisi lokulawula lifaka isilawuli sokushisa okumbili, i-timer kanye nesistimu yokubonisa.
Idizayinelwe ukusika ibhande okusheshayo nelithembekile;
Okuqinile ifreyimu ye-aluminium isitayela
Esilula, umshini wokushicilela wozimele;
Ukushisa okusheshayo uhlelo, sebenzisa i-Silicone Heating Elements ethembekile;
Isistimu yokupholisa esheshayo efakwe ekwakhiweni kweplaten, ipholisa isuka ku-145 ° C iye ku-75 ° C, kuphela 5 amaminithi.